Halkee laga soo dejisan karaa +1000 textures ee Photoshop bilaash ah | Hal -abuureyaasha Online
La shaqeynta qaabab Photoshop waa wax caadi u ah xirfadlayaal badan. Iyagu waa waxa u oggolaanaya in la siiyo xaqiiqda dhabta ah iyo dabiicadda sawirrada oo ka dhigaysa inay beddelaan si ay u helaan dareenka kuwa u fiirsada. Sidaa darteed, in aad yeelato jaanis weyn ayaa shaqadaada kuu fududeyn kara, maxaa yeelay waxaad had iyo jeer heleysaa midka aad raadineyso ama aad u baahan tahay.
Hadda, Sidee looga helaa sawir ka badan 1000 muuqaal Photoshop? Waa hagaag, way fududahay sida loo sii wado aqrinta qodobkan maxaa yeelay waxaan ku siin doonnaa adiga, ma ahan oo keliya 1001, laakiin qaar kaloo badan.
1 Waa maxay qaabab Photoshop
2 Halkee laga soo dejisan karaa qoraallada Photoshop
2.1 TexturePalace, oo ah kan ugu fiican qaababka Photoshop
2.2 Textures lacag la'aan ah
2.6 Sawiro Dadweynaha
2.7 Mayang's Textures Free, oo ah kan ugu fiican sawirrada Photoshop
2.8 Population udubdhexaadka ah
2.9 Qoraallo cusub
2.10 Lumay oo La Qaaday
Waa maxay qaabab Photoshop
Kahor intaanan kuu sheegin meesha aad kala soo baxeyso, aan si cad u sheegno waxa ay yihiin sawirro Photoshop ah. Kuwani waa lakabyo la galiyay sawirrada aad ku shaqeyso iyada oo loo marayo barnaamijka Photoshop. Maxaad ka faa’iideysaa? Hagaag, abuur wasakhda, xaashi warqad ah, qoryo, iwm ... Si kale haddii loo dhigo, waxaad siin doontaa xaqiiqda sawirkaas, ka dhigida runti inay u egtahay wax kale, ama jilid aad taaban karto oo aad dareemi karto dareenkaas ay abuureen.
Halkee laga soo dejisan karaa qoraallada Photoshop
Hadda oo aad si sax ah u ogtahay waxa ay yihiin sawirro Photoshop ah, miyaan kaa caawin karnaa inaad ogaato halka aad ka heli karto in ka badan 1000 ka mid ah? Hagaag, waa wax aad u fudud, halkan waxaa ah meelaha laga soo dejisto:
TexturePalace, oo ah kan ugu fiican qaababka Photoshop
Boggan waa "Quduuska Quduuska ah" ee loogu talagalay dad badan, hanti aan la ogeyn iyo in, si kastaba ha noqotee, keligeed, waxaad horey u lahaan doontaa maktabad ay ku jiraan in ka badan 1000 qaabab Photoshop ah.
Dhammaantood waa lagu soo dejisan karaa bilaash waxaadna ka heli kartaa qaybo aad u kala duwan, laga bilaabo buugaagta, biraha, dabeecadda, waraaqaha, dharka… Waqti badan ayaad ku qaadan doontaa daalacashada shabakadda, layaabna ma leh, maxaa yeelay ficil ahaan waxaad ka heli doontaa wax walba. Intaas waxaa sii dheer, badiyaa waa kuwo aad u firfircoon oo had iyo jeer qaabab badan ayaa soo baxa, markaa ma noqon doontid taariikh.
Textures lacag la'aan ah
Mid kale oo shabakadaha leh xaddiga ugu badan ee qaabab for Photoshop waa tan. Dhexdeeda waxaad ka heli doontaa noocyo badan, laakiin wixii ka sarreeya oo dhan waxay diiradda saaraysaa kuwa dabiiciga ah ama leh darbiyada jaban iyo saamaynta Grunge.
Taasi macnaheedu maahan inaysan ka jirin qaybaha kale? Wax badan kama yara, laakiin waxaa suurtagal ah, isbarbardhiga qaybahaas hore, waxay leeyihiin wax ka yar. Laakiin weli, waxaad heli doontaa in ka badan 1000 ikhtiyaar oo aad ka kala doorato.
Freepik waan ognahay inay tahay bangiga sawirka bilaashka ah iyo lacag bixinta laakiin guud. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay fursado qaar oo loogu talagalay qaabab loogu talagalay Photoshop oo aysan waxyeello u geysanaynin isku dayga, maxaa yeelay runtii way xiiso yeelan kartaa
Ficil ahaan dhammaantood waxay kuu oggolaanayaan inaad soo dejiso PSD, wax aad u wanaagsan maxaa yeelay, illaa inta aan ka tagayo, waad dib u soo saari kartaa oo aad wax uga beddeli kartaa sidaad jeceshahay (laakiin aad leedahay saldhig diyaar ah).
Websaydhkani wuxuu ka mid yahay kuwa ugu waaweyn qaab dhismeedka loo yaqaan 'Photoshop'. Waxa kaliya ee ay weydiistaan ​​ayaa ah inaad iska diiwaangeliso bilaash si aad u soo dejiso faylasha ugu waaweyn. Dabcan, kooxaha waa weyn waxaad u baahan doontaa koontada lacagta lagu bixiyo.
Maxaad ka heli doontaa degelkan? Hagaag, in lagu bilaabo, a kala soocidda qaabdhismeedka qaababka iyo cabirka. Waxay kuxirantahay waxaad ubaahantahay ama aad raadineyso, waxaad hubin kartaa inaad gasho qayb walba oo aad aragto xulashooyinka ay ku siinayaan, taas oo aan horeyba kuugu sheegnay inay badan yihiin.
Haddii waxa aad raadineyso ay yihiin kuwo macquul ah, qaabab dabiici ah, iyo in la abuuro saameyn dibadeed, halkan waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho dhowr. Waxay leeyihiin wax kasta oo ka yimaada xayawaanka, kiristaalo, baraf iyo baraf, qurxinta, rinjiga, dhirta ...
Marka la barbardhigo baraha kale, waxay noqon kartaa waxyar oo faqiir ah, laakiin ku dhow dahay heerka bogagga kale ee waaweyn, Iyo waxa ugu fiican ee ku saabsan waa in, markaad takhasustay, waxaad ka heli doontaa in ka badan bogagga kale ee qaybahaas.
Sida magaca ka muuqata, halkan waxaad ka heli doontaa sawirro badan oo dadweyne, taas oo macnaheedu yahay inaad awood u yeelan doonto inaad u adeegsato labadaba shaqsi ahaan iyo ganacsi ahaanba, adigoon iska qorin inaad soo dejiso.
Waxaa jira noocyo badan oo sawirro ah, laakiin runtu waa taas wuxuu leeyahay qayb u gaar ah qaabab oo halkan waxaad ka heli doontaa xulasho ballaaran oo sawirro muuqaal ah. Dabcan, wixii aan soo aragnay, waxay leedahay noocyo badan, laakiin gaar ahaan dharka iyo dabeecadda (in kastoo aad ficil ahaan wax walba ka heli karto haddii aad waqti u hurto).
Mayang's Textures Free, oo ah kan ugu fiican sawirrada Photoshop
Mana jiraan kun, laakiin afar kun oo ikhtiyaarro ah oo aan hoosta ku siinayno, taas oo kaa dhigaysa inaad yeelato degel aad wax walba ka heli doonto.
Naqshadeedu maahan inay tahay mid casri ah ama mid hadda jirta, laakiin waxa run ahaantii muhiim ah ayaa ah kumaan kun oo qoraal ah oo loogu talagalay Photoshop oo aad ka heli doonto boggan. Hadana waanu kaaga digeynaa inay badan yihiin. Dabcan, waxaan kaaga digeynaa in degelku uu hawada ka maqan yahay laakiin waxaan rajeyneynaa in dhowaan la xallin doono.
Population udubdhexaadka ah
Ikhtiyaar kale oo cusub oo lagu soo dejiyo qaabab loogu talagalay Photoshop gebi ahaanba bilaash. Waxa ugu fiican ayaa ah inaadan u baahnayn diiwaangelin wax walbana waad heli doontaa. Dabcan, booqo qaybta xayawaanka maxaa yeelay qaar iyaga ka mid ah ayaa yaaban.
Ka taxaddar tan. Waxay ka mid tahay bogagga shabakadda ugu fiican, laakiin waxay leedahay qayb bilaash ah iyo qayb la bixiyay. Xitaa sidaas oo ay tahay, waanu kugula talinaynaa maxaa yeelay waxaan u maleyneynaa in qeybta bilaashka ah ay leedahay qaar u qalma oo aadan ka heli doonin meelo kale.
Iskusoo wada duuboo, waxay ku takhasustay qaab dhismeedka dhabta ah iyo dulinka.
Lumay oo La Qaaday
Tani waxay kuu soo bandhigi doontaa xulasho xoogaa ka xaddidan kuwii aan horay u soo aragnay, marka lagu daro inay kugu tijaabiso xoogaa qoraallo ah oo loo yaqaan 'Photoshop' meelo kale oo lacag laga bixiyo, marka iska jir inaad jacayl la gasho mid aan xor ahayn.
Waxaad awoodi kartaa hel noocyo badan, laakiin inta badan waa macquul.
Ikhtiyaar kale oo aad haysataa waa tan, halkaas oo aad ka heli doontid hay'ad qaab-kooxeedyo kuu fududeyn doonta si aad u hesho waxa aad raadineyso. Sidoo kale, waad soo dejisan kartaa iyaga iyada oo aan loo baahnayn in la isdiiwaangaliyo, iyo go'aanno aad u sarreeya, oo gacan ka geysanaya in tayada ugu fiican la siiyo mashaariicdaada.
Iyada oo dhammaan xulashooyinka aan ku siinnay, waxaan hubnaa in aad yeelan doonto in ka badan 1000 qaab oo loogu talagalay Photoshop oo diyaar u ah in la soo dejiyo. Hadda, waxaan kugula talineynaa inaad waqtigaaga qaadatid inaad dib u eegto dhammaan boggaga oo aad kala soo baxdo kuwa laga yaabo inay xiiseeyaan shaqadaada ama heer shaqsiyeed. Ha iloobin inaad kaydiso barahaas si aad u gasho markasta oo aad rabto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Meesha laga soo dejinayo + 1000 qaabab oo loogu talagalay Photoshop